जनताको प्रश्न: ढलेका सीमास्तम्भ कहिले बन्छ ? – Tufan Media News
जनताको प्रश्न: ढलेका सीमास्तम्भ कहिले बन्छ ?
४ मंसिर २०७६, बुधबार ०५:२७
कपिलबस्तु । भारतले नेपाली भू-भाग मिचेपछि यतिवेला सीमा स्तम्भहरुको अवस्थाका बारेमा पनि चर्चा सुरु भएको छ । भारतसँग जोडिएका सीमा क्षेत्रका केही स्तम्भहरु ढलेका र हराएका छन् ।त्यसमध्ये कपिलबस्तु पनि एक हो । साना-ठूला गरी पाँच सय जति सीमास्तम्भ कपिलवस्तु जिल्लामा पर्छ । सीमा स्तम्भ नहुँदा कृष्णनगरको एक हेक्टर जमिन भारतले अतिक्रमण गरेको छ ।